Summii bofaa ittisuurratti labsiin ba'e - BBC News Afaan Oromoo
Summii bofaa ittisuurratti labsiin ba'e
25 Caamsaa 2018
Yaa'iin Dhaabbata Fayyaa Addunyaa miidhaa summii bofaa qolachuurratti xiyyeeffatee akka hojjetu beeksise. Addunyaarratti namoonni kumaatamaan lakkaawan bofaan hiddamanii du'u, rakkoon akkasii heddumminaan biyyoota Afriikaa Sahaaraan gadii keessatti mudata.
Dhaabbatichi akka jedhutti rakkoon fayyaa namaarra summii bofaatiin ga'aa jiru biyyoota kanneen keessatti xiyyeeffannaa hin arganne ture. Kaayyoon labsii haaraa kun biyyoonni akkaataa ittisaa, yaalaa fi to'annaa summii bofaarratti akka hojjetaniif.
Gareen fayyaa dhala namaaf quuqaman labsiin kun namoota bofaan hiddamaniif furmaata kaa'eera jechuun jajaniiru.
Dhaabbati kun biyyoota Afriikaa Sahaaraadhaan gadi jiran kanneen biyyoota hiyyeeyyii keessa jiraataniif qorichi farra summii bofaa akka dhiyaatuuf gaafateera.
Hiyyummaa fi hanqina tajaajila fayyaa lubbuun namoota naannoo kanaa summii bofaatiin akka badu taasiseera, kaanimmoo qoricha aadaa kan ofumaayyuu miidhaa lubuusaaniirraan ga'u waan fayyadamniif jireenyi isaanii yaaddoo keessa jira.
Tarsimoo haaraan kun wayita bofi nama heddu akkaataa dafanii to'achuun danda'amurratti leenjiin akka kennamuu fi iddoowwan balaan summii bofaa itti heddummaatuuf tajaajila wal'aansa duraa kennuurratti kan xiyyeffateedha.
Addunyaarratti waggaa waggaan namoonni kuma 100 caalan bofaan hiddamanii du'u, kanneen keessaa harki 20ni Afriikaa irraati. Baay'inni namoota bofaan hiddamanii qaama hirdhatanii gara miiliyoona walakkaa ga'eera, kunimmoo fedhiin tajaajila fayyaa akka dabalu taasiseera.
Iboolaa: Hubannoo gabaabaa
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa Vaayirasii Iboolaa kan dhiyeenya Riippabliikaa Dimokiraatawaa Koongootti deebi'ee mullatee, ittisuufi talaalluutti jira.
23 Caamsaa 2018
Jireenya Iboolaa booda
Vaayirasiin biyyoota Lixa Afrikaa sadii keessatti babal'ate yaaddoon jireenya namootaa irratti dhiisee deeme danuudha.
13 Bitooteessa 2018
'Haacaaluu waliin 'lubbuun keenya tokko,' duuti isaa hedduu na hubde'
Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa halkan keessa gaafa itti himamu rifaatuudhaan dubbachuu akka dadhabe hima Alii Birraa. "Nan rifadhe, abjuu taha malee kun dhugaa miti jechaan ture" jechuun BBC'tti hime.
'Intarneetni meeshaa haasaa jibbiinsaa tahe, kanaaf cufuuf dirqamne'
Qondaala olaanaa TPLF kan turaniifi achi keessaa bahuun dhaabicharratti qeeqa garagaraa dhiyeessuun kan beekaman Obboo Zaadig Abrihaa, turtii BBC waliin godhaniin ''Intarneetni meeshaa haasaa jibbiinsaa tahe, kanaaf cufuuf dirqamne,'' jedhan.
KALLATTIIN WHOn hojii to’annoo Covid-19 hojjete gamaaggamuufi
Dhaabbati Fayyaa Addunyaa (WHO) deebii to’annoo dhibicharratti kennamee gamaggamuuf marii paanalii qopheessuu beeksise.
Hawaasni Oromoo biyya alaa jiru hiriirra mormii gaggeessaa jira
Hawaasni Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa jiran ajjeechaa Art. Haacaaluu Hundeessaarratti raawwatameefi hidhamuu hooggantoota siyaasaa mormituu balaaleffatu gaggeefamaa jira.
3 Adooleessa 2020
"Mucaan koo dhugaa dubbate malee wanni balleesse hin jiru"
Sirni awwaalchaa artiist Hacaaluu Hundeessaa Kamisa iddoo dhalootasaa magaalaa Ambootti bakka namoonni bebbeekamoon, aanga'oonni mootummaa olaanoo fi dinqisiifattoonni isaa biroo hin jirretti raawwateera.
‎20:49 EAT - 21:04 EAT
Obbo Mikaa'el Booran dabalatee miseensotni Hoggansa ABO hidhaman
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefameen as hookkra tureen lubbuun namaa darbee hoggansi fi miseensotni paartilee mormituuf hidhamaa jiru.
Waajjirri OBN Intarnaashinaal Ameerikaatti caccabe hojii dhaabuu ibse
Waajjirii OBN Intarnaashinaal kan Ameerkaatti argamu, namoota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaatiin dheekamaniin miidhaa irra gaheen hojiisaa idilee dhaabuu ibse.
4 Adooleessa 2020
Abbaan Taayitaa Biroodikaastingii Waajjira OMN Finfinnee cufe
Abbaan Taayitaa Biroodkaastingii Itoophiyaa waajjira OMN Finfinnee jiru cufuun miidiyaalee sadii biroof immoo akeekkachiisa kennuu beeksise.
''Ijoolleen keenya eessa akka jiran hin beeknu'' - Haadha Warraa Obbo Baqqalaa
Obbo Baqqalaa Garbaa dhiibbaan dhiigaa isaanii waan ol ka'eef qoricha isaanii akka fidaniif Poolisiin bilbilee itti himuu Haatiwarraan isaanii Aadde Haannaa Raggaasaa BBC'tti himan.
2 Adooleessa 2020
Ajjeechaa Hacaaluu booda siidaa moototaa diigaman
Namoonni ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa irratti raawwateen dheekkamuun mormiidhaaf daanditti bahan siidaa mootii Haayilasillaasee kan Landaniitti argamuufi kan abbaasaa biyya keessatti jijjigsaniiru.
'Jawaar, Baqqalaa fi kaan aanga'oota mootummaa ajjeesuuf turan' - Poolisii
Jawaariifi aanga'oonni KFO isa waliin to'ataman jiddugala Aadaa Oromootti aanga'oota mootummaa olaanoo walgahiirra turan ajjeesuun ajjeechaa Waxabajjii 15 kan baraa darbee irra deebi'uuf yaalii godhanii turan jedhe poolisiin Federaalaa. Iskindirri Nagaa ammoo garee hundeessuun magaalaa finfinnee keessatti halleellaa gagggeesuuf qindeessaa ture jedhame.
1 Adooleessa 2020
TPLF ajjeechaa Hacaaluu keessaa qooda hin qabu jedhe
Wal dura dhaabbannaa Jawaar Mohaammad fi MM Abiy Ahimad eessaa garam?
'Haacaaluu eenyutu ajjeese, ajjeesise kan jedhu hidda qaba waan ta'eef yakka cimaadha'
'Nafxanyaa' fi MM Abiy wanti walitti fidu hin jiru - Waajjira MM
Ajjeechaa Joorji Filooyid irratti poolisiin ragaa dabalataa argate ibse
''Hiriyyaa kiyya gootichi rasaasaan galaafatame'
'Haacaaluun walaloo artistootaaf wayita barreessullee maqaakoo hin fayyadaminaa jedha'
Karchallee Amboo hanga Galma Barkumee - wallee fi qabsoo Haacaaluu Hundeessaa